Kiobà : Bilaogera Ampielezana Manameloka Ny “Hetsika Mahery Vaika “ Nahatonga Fahafatesana Renibe Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2012 4:04 GMT
Mitantara momba ilay tranga nahafatesana zokiolona iray tany amin’ny faritra Santa Clara ny faran’ny herinandro lasa teo ireto bilaogy Kiobàna ampielezana roa ireto. Na dia teo amin’ny faha-90 taonany aza ity vaviantitra, nandinika ireo bilaogera fa “herisetra fisaoram-bady” no nahatonga ny fahafatesan’ity farany. Nitantara I Pedazos de la Isla fa:
Maty taorian’ny jaly noho ny dona nahazo azy avy tamin’ny fiakaran’ny tosi-dràny i Antonia Rodriguez, reniben’ilay mpitolona Idania Yanez Contreras, araka ny loharanom-baovao avy amin'ny Fijoroana (Resistance) nihetsika mafy ny tosi-dràny taorian’ilay herisetra tamin'ny alalan'ny fisaoram-bady izay nahazo azy tao anatin'ny roa andro.
Nanome toe-javatra vitsivitsy mikasika izay nitranga ny lahatsoratra :
Nitranga ny Alarobia,16 may ny herisetra, rehefa nihazo ny tranon’I Idania Yanez Contreras ireo mpikatroka miaro ny zon’olombelona izay miisa eo amin’ny 30, hivory momba ny asam-panoherana ataony. Isan’ny nanatrika tao ny mpitarika ny fanoherana Jorge Luis Garcia Perez “Antunez” izay tsy maintsy nidify ireo andiana polisy maro miasa eny an-dalambe ao an-tanànan'i Placetas.
Nandritra ity fisaoram-bady (fandroahana) ity, nanomboka nanogahoga ireo mpisara-kevitra teo an-toerana ny andian'olona nanatrika, izay toy ny manao fihetsika tsy maontina… Namoaka sary tamin’izany fihetsika izany tamin'ny alalan'ny Twitter i Antumez. Iray tamin’ireo fotoana mahery setra indrindra tamin’ny fandroahana ny fitoraham-bato ny tranon’i Yanez Contreras nataon'ny vahoaka. Tafiditra tao an-trano ny iray tamin'ireny vato ireny ka nahavoa an’i Contreras, renin’i Yanez Contreras.
Heverina ho nizotra tahaka izao indray ny “andro faharoan'ny fandroahana”:
Nidaroka ny maro tamin’ireo mpitolona ny polisy ka tao anatin’izany i Rolando Ferrer Espinosa, Maria Martinez ary Barbara Portieles tao an-tranon’i Damaris Moya Portieles, izay mifanila ny tranon’I Yanez Contreras.
Manazava i Yanez fa efa nanapa-kevitra mangingina ny fianakaviany hamindra ny renibeny any an-tranon-kavana hafa izay mipetraka lavitra akaiky avy eo raha mbola tsy nitranga ity hetsika fandroahana ampahibemaso ity. Tamin'ny faha-18 ny volana, raha niverina tao an-trano I Antonia Rodriguez, dia mbola nahita ny fihetsika tsy maotina ataon'ireo andian'olona amin’ny fianakaviany. Nandritra izay fotoana izay, nanatri-maso ny herisetra hafa tao amin'ny tranon'ny havana nipetrahany izy. Noho ny fahasorenany hiarovany ny finakaviany no nampiakatra ny tosi-dràny. Fotoana vitsy Taoriana, nitantara I Antunez fa tapaka lalan-drà i bebe ary nandritra ny tolakandron’ny Asabotsy 19 Mey no nitatitra ny fahafatesany ny mpikatroka (Twitter: @ alambradas, @ LibradoLinares, @ maritovoz).
Nanamarika ihany koa I Pedazos de la Isla fa :
Voarara tsy haneho fiaraha-miory [dika tena izy: fanohanana] ny fianakavian’i Yanez Contreras sy tsy hahazo handevina ny renibeny i Antunez izay afaka nody tany an-tranony any Placetas.
Nanome tsiny mivantana ny fitondrana Kiobàna ny Capitol Hill Cubans tamin’ny fahafatesan’ilay renibe 94 taona, ary namoaka sary ho porofon'ny fisian’ny «andian'olona» teo ivelan’ny tranon’ity zokiolona vavy ity.
Ny faran’ny herinandro teo, nanomana hetsika hanao fahirano nandritra ny roa andro ny tranon’ny mpitarika ny mpanohana ny demokrasia Kiobàna Idania Yanez Contreras, filohan’ny Fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Rosa Parks.
Nandritra ny 48 ora, nihiakiaka nanompa sy nitora-bato tao an-trano ireo vondron'olona voaomana ireo. Tsy afa-nivoaka mba hividy na dia sakafo aza ny fianakaviana.
Vokatr'izany, tapaka lalan-drà ary nodimandry ny reniben'i Idania, 94 taona, antsoina hoe Antonia Rodriguez Mirabal.
Mahatsiaro mirehareha tamin'izay vitany mihitsy izao ry Castros.
Nizara izao fihetseham-pony izao i Pedazos de la Isla, amin’ny fitenenana fa:
Ity no fahafatesana hafa izay ahitana lainga avy amin’ny didy jadona Kiobàna nandefa andian'olona handroaka sy hidaroka zokiolona, ankizy ary ny Kiobàna rehetra izay sahy manana fomba fisainana hafa sy mirona ho amin'ny fahafahana.
Hajian-tsary amin'ity lahatsoratra ity, “Santa Clara, Cuba”, avy amin'i roofofeurope, nampiasaina an Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) Creative Commons license [tsy azo amidy ary tsy azo amboamboarina na ovaina]. Tsidiho ny raji-tsary manokan'i roofofeurope.